Dubai, Toerana mahagaga mba hiainana farafaharatsiny Indray mandeha amin'ny fiainana Time Emira Arabo Mitambatra
navoakan'ny Dubai City Company at Enga anie 21, 2019
Ny endriky ny fotsy hoditra avy amin'ny Burj Al Arab dia mamolavola ny alina, satria ny fampisehoana sy ny fampisehoana maivana dia aseho amin'ny rafitra ao anaty dihy manaitra.
Dubai, Toerana mampiavaka hahitana farafaharatsiny indray mandeha amin'ny fotoan'ny fiainana
Dubai dia tanàna mitaky ny fitandremana, fito Emirates niara-narafitra Emira Arabo Mitambatra ao amin'izany I Dubai no tany lehibe faharoa aorian'ny Abu Dhabi. Nanomboka hatrizay ka hatramin'izao tontolo izao fanta-daza, dia lalana izay nanintona ny sain'ny olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ary nahatonga azy ireo hibanjina azy fotsiny, vao hahatsikaritra ny fomba nanoloran-tena sy ny faniriany. Tsy vitan'ny hoe nifindra tamin'ny raharaham-barotra vaovao fotsiny izy ireo, izy ireo dia mitarika toy ny tany izay notsidihin'ny mpitsidika mpizahatany, satria a raharaham-barotra bud, mitombo haingana amin'ny tontolo e-varotra ary maro hafa.
Nipoitra haingana ny zava-nitranga ka navoakany ireo olona an'arivony tapitrisa tany amin'ny taniny tamin'ny fananganana fahafahana maro. Ny fitsidihana an'i Dubai dia niaina nandritra ny androm-piainany ary mino aho fa handany fotoana be eto amin'ny fiainanao ianao na irery na miaraka amin'ny olon-tianao. Tianao ny fitsangatsanganana hitrandraka ireo toerana mahafinaritra indrindra, trano fandraisam-bahiny avo indrindra, trano mahatalanjona mahafinaritra mahatalanjona, ireo nosy tsy manam-paharoa sy ireo sisa.
Amin'ny teny tsotra, raha hitanao avy amin'ny tranobe avo indrindra dia ho hitanao fa mangamanga ny Dubai, mamirapiratra ary iray amin'ireo toerana tsara hitanao eo imasonao izay manome anao ny fahasambarana ao anaty ary mamela anao hiaina fotoana izao. Ka raha efa nieritreritra izany ianao manao drafitra fitsangatsanganana na aiza na aiza avy eo dia diniho ny Dubai ao amin'ny lisitrao satria toerana tsy dia ambany noho ny tontolo sary an-tsaina izay noeritreretinay foana ny hitsidika azy.
Fanamarihana manokana momba an'i Dubai:
1. Toerana mahafinaritra izany
Mitombo haingana i Dubai amin'ny famoronana maro an'isa fahafahana ho an'ny olona ao anatiny sy ny olona avy any ivelan'ny Emirates koa. Ho fanombohana ny asa aman-jery dia tany fahombiazana satria tsy hainao ny tonga haingana amin'ny olona.
2. Toerana izay mampiseho ny maha-zavaboary olombelona na aiza na aiza
Tena marina !! Manontany tena aho hoe ahoana ny fomba ahafahan'ny lehilahy mieritreritra zavatra toy izany ary mameno ny eritreritra amin'ny dingana haingana kokoa? Raha manontany tena ianao hoe inona ny resahiko dia hitsidika any Dubai fotsiny. Azoko antoka fa hanaiky ahy tokoa ianao amin'ny fahitana ireo nosy vita tanana, tranobe mahavariana sy zavatra maro mahatalanjona izay mety tsy hataonao mitsidika na aiza na aiza eto ambonin'ny tany.
3. Ny toerana tsara indrindra & tsara indrindra hijanonana
Eny, Dubai dia iray amin'ny toerana azo antoka indrindra. Ny fitsipika arahana eto dia atao mba hanomezana antoka tsara indrindra ho an'ny vahoaka izay mandeha ao anatiny ary aleony mijanona.
4. Tsy hahita ireo toeram-pivarotana toy ny any, na aiza na aiza
Tsy ho hitanao amin'ny toerana hafa ny toeram-pivarotana mahavariana. Manana toeram-pivarotana 65 i Dubai izay hanolotra fanangonana manokana sy traikefa manokana, hetsika ho an'ny vahoaka. Ny fitsidihana an'i Dubai ary tsy miditra amin'ny toeram-pivarotana lehibe iray dia tsy ho tanteraka na oviana na oviana fa na aiza na aiza tianao hijanonana dia hahita toeram-pivarotana akaiky eo ianao.
5. Boom ny Online Shopping
Ny haingana mandalo izay Dubai dia mahita amin'ny lafiny rehetra fa azo ampiharina amin'ny E-commerce ihany koa. Tao anatin'ny taona vitsivitsy lasa izay, nisy fiovana lehibe teo amin'ny kaontin'ny fivarotana e-commerce izay manompo any UAE ary olona izay mifidy an-tserasera. Ireo fivarotana toa an'i Amazon AE, Noon, Shein ary ny hafa dia misarika tsara ny saina ary manolotra tahiry tsara kokoa amin'ny mpivarotra tsirairay avy Ny code coupon shein.
Tsidiho ny Rezeem - Discount Codes, Vouchers & Deals
6. Andro lehibe ho an'ny mpivady
Mpankafy anao ve ianao fiara? Avy eo, dia ho tadidinao tsara ny dianao mankany Dubai mandritra ny androm-piainany satria ny fiara tsara indrindra dia ho hitanao eny am-pita. Mety ho i Ferrari, Mercedes na Aston-Martin, ilay fiara tsara sy lafo indrindra dia nirohotra fotsiny eny an-dalana isaky ny misy. Noho izany, apetaho ny masonao hahitanao ireo fiara marika vaovao izay tena tianao.
7. Tsena izay Too Gold, Yeah !!
Sarotra ny mamindra ny "Ireo mpitia volamena" avy amin'ny toerana iray, izany no tsenam-bolamena. Eny, efa naheno an'izany ve ianao? Azoko antoka fa raha miditra amin'ity tsena ity ianao dia hahagaga anao fa na inona na inona. Ho hitanao ny volamena aseho tahaka ny mahazatra asehontsika ny voankazo na ny sasany any an-tsena. Raha mpitia volamena ianao dia vonona tsara ny hividy izay ilainao.
8. Herinandro dia manomboka amin'ny Alahady
Rahoviana ianao no manomboka ny herinandro? Alatsinainy? Avy eo, ao an-tsainao fa mila manova izany ianao amin'ny mitsidika an'i Dubai satria eto dia manomboka amin'ny alahady sy manomboka ny Zoma ny fiandohan'ny herinandro.
9. Toerana fisakafoanana izany, indrindra ny Zoma Brunch dia tena mahafinaritra
Aza sary an-tsaina fotsiny brunch kely misy lovia voafetra ao anaty lisitra satria ny Dubai Friday Brunch dia mihoatra noho izany. Izay rehetra azonao hohanina; izay sotroinao sy ny sakafo matsiro rehetra mandray amin'ny brunch hisakafo sy handray ny fahafinaretana feno.
10. Mora ny mahazo asa any Dubai
Mitady asa any amin'ny Emirà Arabo Mitambatra dia mora. Eny, raha hainao ny manao izany amin'ny fomba ninja. Ny fomba tsara indrindra dia ny mihatra amin'ny ny toeram-piasana rehetra ao Dubai ary avy eo masoivoho mpandraharaha any Dubai sy Abu Dhabi. Amin'ny fampiharana sy fisoratana ny CV anao amin'ny toerana mety. Azo antoka fa manampy anao hahazo asa any Emirà Arabo Mitambatra.
Inona ny toeram-pi Bes Besahy tokony hitsidika an'i Dubai?
Araka ny voalaza, Dubai dia toerana mampihetsi-poza sy traikefa tena mahavariana. Na dia mitsidika mandritra ny herinandro aza ianao dia mbola hahita maro tavela ao satria maro ny isan'ireo toerana tsy maintsy ahitanao azy sy hiaina. Mora ny mahazo ny tapakila ho an'ny hetsika rehetra na any amin'ny counter na amin'ny vavahadin-tserasera toa an'i Klook haka azy ireo amin'ny vidiny mora-nanina Klook promo codes.
Tsy misy izay mitsidika an'i Dubai ary tsy manandrana Desert Safari. Betsaka ny zavatra azo andramana nefa i Dubai dia mbola maniry an'io safira Desert io izay manome fahafinaretana lehibe amin'ny fitsangatsanganana. Na dia ny olona sasany aza dia manandrana Safari raha vao maraina hahita ny fiposahan'ny masoandro any amin'ny tanin'ny fasika. Ny mitaingina camelback dia traikefa tsy manam-paharoa izay hanome anao fahatsiarovana mahatalanjona indrindra izay ankaminao mandritra ny androm-piainana.
Ferrari World Tour, tsy hoe kianja tsotra fotsiny
Ny tontolon'ny Ferrari no tena manaitra indrindra hanananao ao amin'ny zaridaina lohahevitra. Ny firafitra lehibe indrindra sy ny traikefa tena mahavariana ao anatiny toa an'i Junior Grand Prix, ny Turbo Track, ny Flying Aces, ny Formula Rossa, ny Mamma Rossella ary ny maro hafa dia hamarana ny andronao amin'ny an-tsoratra mahavariana.
Jumeirah Beach Walk dia trano fonenana tokana faritra izay manome fomba fijery mahafinaritra ny vahoaka. Tianao ny mandeha nefa mandeha amin'ny tora-pasika eo alohan'ny marina manaitra. Azoko antoka fa ho tia anao ny handeha amin'izany. Manandrama fotsiny!
Jumeirah Beach Walk dia faritra misy toeram-ponenana sehatra iray izay manome fomba fijery mahafinaritra ny olona. Tianao ny mandeha nefa mandeha eo amoron-dranomasina marina manaitra. Azoko antoka fa ho tia anao ny handeha amin'izany. Manandrama fotsiny!
Ankafizo ny Dining Desert
Eritrereto, tsara ny sakafo ary safira ny efitra tsara tarehy nefa ahoana no ahafahan'izy roa miara-mipetraka? Raha ao anatin'io eritreritra io ianao dia milaza aho fa mila manandrana izany ianao satria ny rameva nentin-drazana mankany amin'ny lay, fananana sakafo be dia be mankafy ny mozika sy ny dihy kibo dia traikefa vaovao tanteraka dia hanana ianao.
Ny nosy Palm, toerana tokony hotsidihanao
Mety efa nahita sary marobe tamin'ity 'Nosy Palm' ity ianao, saingy manome izany aingam-panahy izany. Ho gaga anao ianao ary hanisy eritreritra, ny fomba ahafahana mamorona zavatra tsara tarehy amin'ny endrika hazo rofia. Ireo fahagagana maritrano telo dia noforonina tsara izay nijoro tamin'ny ny tena mahatalanjona sy ny nosy manmade voalohany eto an-tany ary koa ny fahazoana ny lohateny hoe "Valo Maneran-tany".
Wadi Wurrayah, Toerana izay tsy ho henonao momba
Toerana mahafinaritra izy io izay voatanisa ao amin'ny faritra vitsy an'isa ao Dubai nefa matoky ahy, dia iray amin'ireo toerana mahavariana indrindra ary renirano voajanahary tokana sy ny dobo filomanosana an'i Hatta voajanahary ao Hatta. Ny zavatra iray mahaliana momba ity toerana ity dia ilay ao amin'ny efitra izay sahabo adiny iray eo ivelan'i Dubai.
Ny Burj Khalifa, The World Tallest Building
Mijanona ho zavatra mahaliana foana ny fikarohana ireo toerana saingy raha te-hijery ny tranobe Burj Khalifa ianao izany no fiainanao efa ela. Izy io no rafitra avo indrindra maimaim-poana, izay misy elanelan-drivotra mankany amin'ny rihana 134th avelao ny vahoaka hiainana izany ary hitsidika an'i Dubai amin'ny fanamarihana tokana. Izy io dia toerana iray izay ahafahanao mahita an'i Dubai izay marobe amin'ny lafiny iray ary amin'ny lafiny iray hafa dia hiseho izany ilay tany feno fasika.
Mandeha Skiing, Toerana Tsy Azonao Intsony
Azoko antoka fa mety tsy hieritreritra izany ianao nitsidika toerana toa izao tany Dubai. Eo anelanelan'ny efitra sy ny toetr'andro mafana, Sky Dubai dia toerana mety hitondra anao mankany amin'ny tontolo hafa izay mety tsy hoheverinao ho hita eo. Eny, ao amin'ny Mall of Emirates, dia ho niaina ny seho fisehon'ny tongotra 1300 azo atao milalao sy hankafizana mandritra ny taona ianao. Azonao jerena daholo ny zava-drehetra hanandrana ity seho mitaingina ity.
Feno fankasitrahana ny tany Disney
Disneyland dia manana vavahady misokatra ho an'ny ankizy amin'ny taona rehetra izay fialamboly feno sy fialamboly be dia be sy kilalao fampidirina no ampiana handany fotoana tsara miaraka amin'ny ankohonana sy ny namany. Tsy izany ihany kilalao zaza, dia afaka mahita traikefa nahafinaritra, spa, golf, fivarotana, safidy fisakafoanana sy ny maro hafa mba hanandrana sy ankafizo miaraka amin'ilay olon-tiana.
Tsidiho ny fampisehoana lehibe indrindra an'ny Fountain eto amin'izao tontolo izao
Tsy hahita loharano iray mahazatra sy ankehitriny ianao raha tsy any Dubai. Be ny loharano ao Dubai nefa ny loharano mampiseho izay saika mahatratra 1000 tongotra lava ary mitifitra ny rano hatramin'ny 500ft dia tena mahavariana, sa tsy izany? Marina, marina izany ary mety hitranga eto amin'ny tontolo Arabo ihany.
Famaranana ho an'i Dubai, Ny toerana tsara indrindra hapetraka any UAE
Betsaka ny toerana hafa ny fitsidihana sy ny traikefa andehanana any Dubai. Noho izany, mikasa ny fitsidihana ary mitsidika ireto lisitra tena mahavariana ireto. Azo antoka fa hanome fotoana maharitra ny fitsidihana an'i Dubai. Androany dia mandehandeha amin'ny teti-bolanao i Dubai amin'ny alàlan'ny sehatra fizahan-tany toa an'i Emirates mampiasa azy Fampirantiana fampiroboroboana Emirates. Ankafizo ny Fitsidihana Dubai!!
Dubai, Toerana mahagaga mba hiainana farafaharatsiny Indray mandeha amin'ny fiainana Fotoana!
Manantena anao hahita anao any Dubai, Emirà Arabo Mitambatra!
Dubai City Company manome tsara izao mpitarika ho an'ny asa any Dubai. Ny ekipanay dia nanapa-kevitra ny hampakatra vaovao ho an'ny fiteny tsirairay ho antsika Jobs in Dubai Guides. Noho izany, ao an-tsaina, dia afaka mahazo mpitarika ianao izao, toro-hevitra sy asa any amin'ny United Arab Emirates amin'ny fiteninao.